Tuesday June 25, 2019 - 20:13:19 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wadanka Muritaaniya waxaa lasoo gaba gabeeyay doorashooyinkii madaxtinimada oo ahaa kuwa ay ku loolamayaan kooxaha mucaaradka ah iyo jeneraallada dabadhilifyada ah ee mudadad tobanaanka sana ah soo maaamulayay wadanka dhaca mandiqadda maqribul islaam
Wararka ka imaanaya muritaaniya ayaa sheegaya in doorashooyinkii dhacay uu ku guuleystay jeneraal ay aad isugu dhowyihiin madaxweynaha waqtigiisu dhammaadana kana mid ahaa golaha wasiirada ugu awoodda badan xukuumaada.
Guddiga doorashooyinka Muritaaniya ayaa iclaamiyay in uu xilka madaxweynaha ku guuleystay Jenetaal Max'med axmed Wald Alghazwaani oo ahaa wasiirka difaaca.
haddii maxkamadda daaquudka wadanka Muritaaniya ay ogolaato madaxtinimada musharaxan waxay noqon doonaa markii ugu horraysay oo si nabad gelya ah xukunka loola kala wareego Muritaaniya muddo 60 sanadood ah kadib, muritaaniya waxay caan ku tahay inqilaabyada melleteri oo wadanka waxaa maamula Jeneraallo.
Alghaznawi oo 60 sana jir ah ayaa dhashay sanaddii 1959 wuxuu kasoo jeedaa qoys katirsan dariiqada suufida oo caan ka ah wadanka Muritaaniya wuxuu kamid ahaa Jeneraalada sida aadka ah loo yaqaan wadanka, ka hor intii uusan noqon madaxweynaha wuxuu lasoo shir tagay in uu wax ka qaban doono arrimaha is addoonsiga oo ah dhaqan kajira wadanka sidoo kale wuxuu sheegay in uu wadanka ka dabar jari doono dhaqanka inqilaabka.
Jeneraal Algazwaani ayaa sanaddii 2005 wuxuu noqday taliyaha ciidamada gaadiidka gaashaaman wuxuuna qeyb ka ahaa inqilaabkii uu talada wadanka ku qabsaday saaxibkiis maxamed weld Bin cabdul Casiis.
Sanaddii 2018 ayuu alghazwaani iclaamiyay in uu noqday jeneraal howlgab ah kadibna waxaa loo magacaabay wasiirka difaac isla sanadkaas ayuu iskusoo sharaxay xilka madaxtinimada wuxuuna taageero weyn ka helay madaxweynihii wadanka iyo dhammaan saraakiisha ciidamada.
kooxaha mucaaradka ayaa iyana iclaamiyay in ay kasoo horjeedaan natiijada kasoo baxday doorashooyinka iyagoo eedeyn kulul ujeediyay guddiga doorashada, magaalooyinka ay ku xoogganyihiin kooxaha mucaaradka waxaa ka dhacay iskusoo baxyo lagu diidanyahay natiijada horudhaca ah.